DAAWO: Goobjoog TV oo xarun cusub ka furatay magaalada Oslo ee dalka Norway. | gobolada.com
DAAWO: Goobjoog TV oo xarun cusub ka furatay magaalada Oslo ee dalka Norway.
Kullaan oo uu ujeedkiisu ahaa daahfurka Xafiis cusub goobjoog Tv ka furato Magaalada Oslo ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada Oslo ee caasimada wadanka Norway.
Kulankaan oo ay ka soo qeyb galeen qeybaha kala duwan Jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Norway, sida Culumaa’udiinka, Cuqaasha iyo Siyaasiyiinta waxayna dhammaantood sheegeen inay la dhacsan yihiin xafiiska cusub ee goobjoog TV ee xiligan laga furay magaalada Oslo, ayna taasi badalkeed la shaqeyn doonaan.
Waxgaradkii ka soo qeyb galay munaasabadda ayaa dhammaan sheegay in goobjoog furitaankeeda ay ku soo aaday xili Soomaalida ku nool wadanka Norway gaar ahaan Oslo ay baahi weyn u qabaan warbaahin xiligani ka hana qaado guud ahaan wadanka Norway, isla markaana tabisa waxyaabaha ay u baahan yihiin Soomaalida halkan ku nool.
“Waan la shaqeyn doonaa waana soo dhaweyneynaa Tv-ga goobjoog waxaana ka codsanaynaa maamulka iyo shaqaalaha inay ku soo kordhiyaan barnaamijyo looga hadlayo dhibaatooyinka Soomaalida ee ku heysata qurbaha gaar ahaan wadanka Norway” ayay yiraahdeen waxgaradkii ka soo qeyb galay munaasabadda.
Saciid oo ka mid ahaa dadkii kalmadaha ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in ay Tv-ga ka dhursugayaan inay ku soo kordhiyaan barnaamij kor loogu qaadayo aqoonta Carruurta halkan ku dhalatay luqada Afka Soomaaliga, isla markaana ay ka daawan karnaa Filimaan kartoon ah kuna turjuman luqada afka Soomaaliga.
Sidoo kale Siyaasiyiinta ayaa dhankooda sheegay in goobjoog Tv xiligaan ay u tahay guul inay xafiis cusub ka furato wadanka Norway, waxa ayna sheegeen in aragtidooda ku soo bandhigi doonaan lana shaqeyn doonaan.
Ugu danbeyntii waxaa goobta ka hadlay Agaasimaha guud ee Tv-ga goobjoog xaruntiisa cusub magaalada Oslo Axmed Qare oo sharaxay qaabka uu u shaqeyn doono Tv-ga iyo waxyaabaha ay ku soo kordhin doonaan.
Isku soo wada duub waa markii ugu horaysay Tv ay Soomaali leedahay laga furo magaalada Oslo ee caasimada dalka Norway, marka laga tago Tv-ga Qaranka Soomaaliya oo halkaas wakiil wareed uga ah Wariye Xasan Rasta.
SAWIRADDA HALKAN HOOSE KA DAAWO.
HALKAN HOOSE KA DHAGEESO WARBIXINTA OO DHAMEESTIRAN.